Inona no fitaovana tsara indrindra amin'ny Amazon amin'ny varotra izay ampiasain'ny mpisaly?
Ny mpivarotra amperinasa Amazon rehetra dia mampiasa ny karazana fitaovana fikarohana sy fitadiavana hampiroborobo ny fanentanana fanentanana sy ny fampivoarana ny fivarotana amin'ny lisitry ny vokatra. Amazon dia miahy ny tombony anananao ary manome anao fitaovana fototra amin'ny fitantanana ny vokatrao sy ny baikonao. Na izany aza, ireo programa Amazon ireo dia tsy afaka manampy anao amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra - laptop repair palo alto ca. Izany no mahatonga azy io ho azo ampiasaina amin'ny fampiasana fitaovam-pifanakalozan-dresaka Amazon ho an'ny mpanjifa mba hisarihana mpanjifa maro kokoa ary hampitombo ny fidiram-bola.
Ny fitaovam-pitaovan'ny Amazon dia afaka manome fahafaham-po ny filan'ny orinasa rehetra, manomboka amin'ny fikarohana momba ny fikarohana momba ny fikarohana momba ny fifamoivoizana sy ny famaranana amin'ny fihazonana ny vidin'ny Buy Box. Noho izany, ny zavatra rehetra ilainao dia ny mahatakatra ny safidinao rehetra ary ny fitadiavana ny fifangaroana fitaovana mahomby mba hitantana amim-pahombiazana ny fitantanana ny e-commerce Amazon-commerce.
Ity lahatsoratra ity dia horesahantsika ireo fitaovana momba ny varotra Amazon izay natao mba hanintonana fifamoivoizana mivezivezy kokoa amin'ny lisitry ny Amazon-nao ary hampiakatra avo kokoa ny varotra Amazon.
Araka ny Amazon Vendor
Central and Sales Central, ny mpivarotra dia tsy mahazo matetika ny karamany fa tsy in-droa isam-bolana. Raha te-hampandroso ity dingana ity ianao (raha tsy isalasalàna azy io ianao), mila mampiasa iray amin'ireo fitaovana handoavana ny vola ianao. Manompo izy ireo mba hanampy ireo mpivarotra Amazoa mandray karama haingana haingana indroa isam-bolana. Amin'ny fampiasana ireo fitaovana ireo, afaka mahazo ny volanao isan'andro ianao. Ity karazana serivisy ity dia fantatra amin'ny anarana hoe factoring. Ny fitaovam-pandaharana haingana kokoa dia mandoa Amazon mpivarotra isan'andro mifototra amin'ny totalin'ny varotra. Ireo fitaovana ireo dia manangona vola mivantana avy any Amazonia ho an'ny fandaharam-potoana fandoavam-bola tsy tapaka.
Ny fampiharana ireo fitaovana ireo, dia ho afaka hitombo haingana kokoa ny orinasa ianao noho ny fidirana mivantana amin'ny volanao amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Hanome anao fahafahana hahatsapa mahaleotena avy any Amazonia ary hanao fampiasam-bola amin'ny fampandrosoana ny orinasa. Ankoatra izany, dia ho afaka hifehy ny volanao ny volanao mba handoavana ny faktiora amin'ny fandaharam-potoanao, fa tsy ny Amazon.
Ny fitaovana tsara fandoavam-bola izay mifanaraka tsara amin'ny filaharanao Amazon dia ny Fividianana. Ity fitaovana ity dia manome karama isan-kerinandro amin'ny mpivarotra amin'ny habe rehetra. Ny vidim-pamoriana isam-bolana dia 2% ny fivarotana Amazon.
Fitaovana ho an'ireo izay mila fitadiavana teny fototra sy fikarohana momba ny vokatra
Raha mitady vahaolana momba ny Amazon ianao, Ny fitaovana dia hanampy anao tsara indrindra. Amin'ny fampiasana fitaovana toy izany, dia afaka mamakivaky ny angon-drakin'i Amazon ianao mba hamaritana hoe inona ny mpividy amin'ny fikarohana mba hampiasana ny vokatrao. Ho afaka hanamarina ny volavolan-kevitry ny tenimiafina tsirairay na ny fehezanteny sasantsasany ianao. Azonao ampiasaina koa ny kalkulator-tombony mba hamantarana ny vola sy ny tombam-bidy ho an'ny fikarohana tsirairay amin'ny Amazon.
Mba hitadiavana ny teny sy ny vokatra azo tsapanao izay hahatonga anao hahazo vola miditra amin'ny Amazon, mila manao fampielezan-kevitra goavana ianao ao amin'ny tsipika farany amin'ny fanentanana fanentanana Amazon. Ny teny fikarohana goavana dia hanampy anao hamorona lisansa momba ny lisitry ny Amazon SEO mivarotra ary hahazo vola bebe kokoa amin'ny Amazon. Ny rindrambaotin'ny fikarohana matihanina amin'ny ankapobeny dia afaka manome anao tahirin-kevitra azo tsapain-tanana amin'ny fifaninanana, izay manome ny fomba fijery azony amin'ny loka sy ny tombony azony.
Maro ny tenimiafin'i Amazon ary fitaovana fikarohana momba ny vokatra ao amin'ny tranonkala. Tokony hanamarina ny tsara indrindra amin'izy ireo ianao ary hahita ny tsara indrindra ho an'ny orinasanao.
Ny fitaovana dia fitaovana fikarohana am-pahamendrehana Amazon izay manampy amin'ny fikarohana ny teny sy ny vokatra amazonin'ny Amazon. Manampy amin'ny fitadiavana ny teny fitadiavam-bola amin'ny fitadiavam-bola sy zavatra manan-danja amin'ny Google extension. Ny vahaolana dia mampiseho ny teny filamatra ambony indrindra amin'ny famokarana vokatra iray hanampy anao hijoro ao amin'ny fikarohana Amazon. Ny tombony iray hafa dia ny fahafantaranao hoe inona no mitarika ny fivarotan'ny mpifaninana aminao.
Mampiasa fitaovana fikarohana momba ny fandalinana ianao, dia ho azonao tsara ny tombony mety ho azonao amin'ny zavatra tianao haleha. Azonao atao ny mividy vidiny, sandany, ary varotra ho an'ny vokatra rehetra amin'ny Amazon. Ireo tahirin-kevitra rehetra nomen'ny Scope ireo dia hanampy anao hampitombo ny fikarohana. Azonao atao ny mamantatra ny fikarohana rehetra ao amin'ny rakitra CSV ho an'ny fanadihadiana hafa.
Ny vidin'ny fanombohana isam-bolana dia $ 32. 50.
Sonar dia fitaovana fikarohana maimaimpoana maimaim-poana Amazon izay miorina amin'ny mpikaroka rehetra momba ny tena angona avy amin'ny mpanjifa. Sonar dia mampiasa algorithm be pitsiny mba hamantatra izay mety hitrangan'ny mpanjifanao amin'ny Amazonia ary manangona ireo angona rehetra ireo ao anatin'ny tahiry. Raha oharina amin'ny fitaovana maoderina hafa, ny Sonar dia manome mpivarotra manana fahafahana bebe kokoa amin'ny fikarohana ASIN reverse, fitadiavana fikarohana mba hitadiavana ny teny fikarohana, ny amontana amazonin'ny Amazon, isaky ny sokajy tsirairay, ary ireo asa hafa sarobidy hafa.
Tsara ny manamarika fa ny sonar Sonar dia tsy ahitana afa-tsy ireo teny fikarohana izay i ASIN dia miorina amin'ny pejy voalohany amin'ny valin'ny fikarohana.
Ity dia app maimaim-poana Chrome.
Tools ho an'ireo izay mila asa fitantanana fananana
Misy fitaovana momba ny varotra Amazon izay ahafahan'ny mpivarotra mitantana ny lisitry ny vokatra Amazon sy ny entana ivelan'ny mpivarotra Central dashboard. Ireo fitaovam-pivarotana ireo dia mampifandray ny angona avy amin'ny Amazon amin'ny data vaovao. Ny fampiharana ireo fitaovana an-tserasera ireo dia afaka manampy sy manova ny vokatra, manatsara ny lisitry ny lisitra, manamboatra ny lisitra, manitsy ny vidiny, ary mampiasa asa maro hafa aza. Ny fitaovan'ny lisitry Amazon dia mety hampiovaova ny angon-drakitra momba ny tahirin-tsolika amin'ny varotra hafa. Manome anao fahafahana hivarotra ny vokatrao rehetra amin'ny tsena marobe. Ankoatra izany, afaka mitantana ny baiko sy ny fandefasana ny fivarotana rehetra ianao.
Maro amin'ireo fitaovana fitantanana ny fitaovana ireo no manome politika be dia be. Noho izany dia afaka manohana ny mpanjifa ny varotra fivarotana maro.
Ireo fitaovana mivarotra ireo dia ny SellerEngine Plus ($ 49. 95) - manome fitaovana fitantanana feno, JoeLister (29 dolara) - manompo amin'ny mpivaro-tena Amazon sy eBay; Vendio ($ 99) - manompo tsara ny Amazon mpivarotra sy sehatra varotra hafa; SellBrite ($ 183) - akanjo ho an'ny mpivarotra sy ny mpivarotra ambaratonga ambony amin'ny Amazon sy ny toeram-pivarotana hafa malaza.